माधव नेपाल समूहमा छलफल- वैशाख २७ अघि नै सांसदबाट सामूहिक राजीनामा ! – Nepal Press
माधव नेपाल समूहमा छलफल- वैशाख २७ अघि नै सांसदबाट सामूहिक राजीनामा !
कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनलाई बहुमतमा पुर्‍याउने अन्तिम विकल्प
त्यसका लागि माधव नेपाल समूहका कम्तीमा २१ जना सांसदले सामूहिक राजीनामा दिनेबारे सोमबारदेखि सघन छलफल शुरू भएको एमालेका एक प्रभावशाली नेताले बताए । त्यो विकल्पमा जानुअघि ओलीसँग निर्णायक संवाद र शेरबहादुर देउवा तथा प्रचण्डसँग पनि छलफल हुने बताइन्छ ।
सामूहिक राजीनामा दिन माधव पक्षका २२ जना नै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् ? प्रष्ट भइसकेको छैन । अहिले राजीनामा दिने भनेको २ वर्ष बाहिर रहने हो र राजनीतिक भविष्य पनि दाउमा राख्ने नै हो । जे भए पनि ओलीलाई अल्पमतमा पार्न पुग्ने संख्या आफूहरूसँग तयार रहेको नेपाल पक्षका नेताहरू बताउँछन् ।
3 thoughts on “माधव नेपाल समूहमा छलफल- वैशाख २७ अघि नै सांसदबाट सामूहिक राजीनामा !”
यो खालको आत्मघाती खेल त पक्कै नखेल्लान है!
यतिखेर आएर देउवालाई प्रम बनाउन जोखिम मोल्ने कुरा मूर्ख्याई हुनेछ।
साभासद पदबाट राजिनामा भनेकाे मतदाताकाे हत्या गर्नु सरह नै हाे । आवेग र घमण्डबाट हाेइन कि विवेक र विश्वासबाट निर्देशित हुन सिक्नु हाेस्
ऐमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु
आफ्नाे जीवन त्यागेर अरुका लागि किन मलामि जादै छाै ?
नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रम बनाउने प्रचण्डको सपना कुनैपनि वामपन्थीले ठीक भन्न सक्दैन् तिनीहरू ओलीका विरोधी नै किन नहुन अहिले एमालेमा माझहरूले विद्रोह गरेर ओली सरकार ढलाउँछन भन्ने हल्ला जसपालाई अलमल्याउन र माओवादी केन्द्रभित्रको विद्रोह रोक्न गरिएको सुनियोजित प्रचार हो।